Jereo ny Moviphone: Ilay smartphone vaovao miaraka amina Projector HD atolotra ao amin'ny CES any Las Vegas | Androidsis
Las Vegas CES dia manohy manome zavatra horesahina, ary ireo orinasa goavambe toa an'i Samsung, Sony, LG, ary ny maro hafa, dia manohy miavaka amin'ny fanavaozana ara-teknolojia azy ireo. Na izany aza, toerana iray ihany koa mba hampisehoana ireo orinasa tsy fanta-daza sy hampisehoana hoe inona no nanaovana azy ireo ary inona no azon'izy ireo atolotra amin'ny tsena amin'ny taona 2018.
Amin'ity indray mitoraka ity, Hamafisinay ny fandraisan'anjaran'ny Wireless Mobi Solutions (WMS), izay nandefa smartphone vaovao. Izy io dia telefaona finday miaraka amina projet de définition avo lenta, izay miavaka amin'ny fanomezana anao efijery hatramin'ny 100 santimetatra. Ity teknolojia ity dia fantatra fa efa hita taloha, fa tsy famaritana avo amin'ny efijery lehibe toy izany.
Endri-javatra manan-danja indrindra amin'ny Moviphone
Ity fitaovana ity dia misy batterie 4.000 mAh, izay hanome anao ny fizakantena feno miaraka amin'ilay tetikasa mandritra ny efatra ora miaraka amin'ny famirapiratan'ny efijery farafaharatsiny, dimy ora miaraka amin'ny famirapiratana amin'ny ambaratonga antonony ary hatramin'ny enina ora miaraka amin'ny efijery fa misy ny projet miasa. Tsara homarihina fa raha hampavitrika ilay projecteur dia tsy maintsy manokatra ilay application fotsiny ianao dia izay ihany.
Izy io dia manana efijery OLED 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD (1.980 1.080 x XNUMX teboka) ary manana processeur MediaTek 1.5 GHz octacore koa izy. Ny fahatsiarovana ilay fitaovana dia mety miovaova arakaraka ny maodely novidinao, mety ho RAM 3GB miaraka amin'ny ROM 32GB na RAM 4GB miaraka amin'ny ROM 64GB, mety ho nitarina hatramin'ny 128GB tamin'ny alàlan'ny karatra microSD.
Mihetsika ity terminal ity miaraka amin'ny Android 7.0 Nougat, fa mbola tsy fantatra raha afaka hanavao ny Android 8.0 Oreo.
Ny fakan-tsary any aoriana dia 13 megapixels misy autofocus sy LED Flash tafiditra ao, ary ny fakan-tsary eo anoloana dia 8 megapixels. Izy io dia manana Bluetooth v4.2, ary koa fanokafana indroa ho an'ny SIM, mpamaky ny rantsan-tànana ao aoriny, ary fakan-tsarimihetsika 3.5 mm. Izy io koa dia manana fidirana NFC sy USB Type-C.
Ny vidiny dia $ 599 (Manodidina ny 500 euro), ary azo alaina manomboka izao ny pejy WMS ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Discover Moviphone: Ilay finday avo lenta vaovao miaraka amina projecteur HD atolotra ao amin'ny CES any Las Vegas
OnePlus dia hanolotra ny findainy vaovao amin'ny faran'ny telovolana faharoa